CAAFIMAADKA CUSUB FARSHAXANKA QODOBO kale heshiisyo madadaalo DHAQAALAHA
Chadwick Boseman: xiddig madow oo madow oo lagu aasay Belton, South Carolina
Chadwick Boseman waxaa lagu aasay qabuuraha Welfare Baptist Church qabuuraha Belton, South Carolina, oo dhowr mayl uun u jirta magaaladiisa Anderson. Tan waxaa lagu xaqiijiyay shahaadada dhimashada ee ay heshay E! Wararka.
Liiska filimada cusub & taxanaha la daawado Oktoobar 2020
Liisaska filimada cusub & taxanaha la daawan doono Oktoobar 2020 Heerkulku si aad ah ayuu hoos ugu dhacay maalmihii ugu dambeeyay laakiin taasi waa caadi maxaa yeelay waxaad awoodi doontaa inaad isku soo duubto buste intaad daawaneyso barnaamijka cusub ee Netflix! ...
"Africa Mia": oo ay ku socdaan raadkii hal-ku-dhigga reer Maliis ee ikhtiraacay laxanka Afro-Cuba
"Rendez-Vous chez Fatimata": halyeey caan ah oo caan ah 1960-kii wuxuu ka dhashay safarkii fanaaniinta Mali ay ku tageen Havana. Filimka "Africa Mia", oo soo bixi doona Sebtember 16, Richard Minier ayaa sheekadooda sheegaya. 1964. Waxay ahayd maalintii xigtay ...
Dacwadii Johnny Depp ee ka dhanka ahayd Amber Heard dib ayaa loo dhigay!
Dacwadda cayda ah ee Johnny Depp ee ka dhanka ah Amber Heard ee gobolka Virginia ma dhici doonto bisha Janaayo. Garsooraha kiiska gacanta ku haya ayaa ku dhawaaqay in dacwadaha la qaban doono laga bilaabo 3da May, 2021. Jilaaga Burcad Badeedka Kariibiyaanka ah had
Afrikada Dhexe: tartanka loogu talagalay dhagaystayaasha ... iyo saameyn
Chad, Equatorial Guinea, Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe groups Kooxaha maqalka leh ee reer Cameroon waxay ku ciyaarayaan xuduud si ay u ballaariyaan joogitaankooda gobolka. Jean-Pierre Amougou Belinga waxay dabaysha ku haysataa shiraacadeeda Bangui. Sida…
Filimka Jaceylka Dadka Waaweyn - Video
LA SAMBA AFRICAINE TV waa kanaalada ugu fiican Afrika ee madadaalada la leh filimada cusub ee Nigerian, Ivorian iyo Cameroon iyo gaar ahaan ha iloobin inaad gujiso xiriidhada hoose:…
Soo qabta Paul Rusesabagina, geesiga filimka "Hotel Rwanda" - Video
Paul Rusesabagina, oo sheekadiisu dhiirrigelisay filimka "Hotel Rwanda", ayay booliska Rwanda qabteen Isniintii. Nin muddo dheer dhaleeceyn jiray Madaxweyne Paul Kagame, waxaa lagu eedeeyay falal argagixiso. Ku soo biir channelkeena ...
Dhimashada Chadwick Boseman, jilaa "Black Panther" - Video
Chadwick Aaron Boseman waa jilaa Mareykan ah, wuxuu ku dhashay November 29, 1976 magaalada Anderson (South Carolina) wuxuuna ku dhintey August 28, 2020 magaalada Los Angeles (California). Wuxuu u dhintay kansarka mindhicirka kadib afar sano oo uu halgamayay.
Chadwick Boseman Mareykan ah, oo ah xiddigihii guusha meeraha ee istuudiyaha Marvel "Black Panther", ayaa…
Chinde Agoosto 30, 2020 0
Nin u dhashay dalka Mareykanka oo lagu magacaabo Chadwick Boseman, oo ahaa xiddigihii guusha ka gaadhay meeraha istuudiyaha Marvel "Black Panther", ayaa ku dhintay da'da 43 jir, ka dib markii uu la dagaallamay kansar muddo afar sano ah oo qarsoodi ah, sidaana waxa Jimcihii sheegay wakiilkiisa. U ciyaar sida boqorka ...
Muranka ka taagan qaybta maqalka maqalka ee Senegal!
Chinde Agoosto 27, 2020 0
Cadaadis uga yimid ururada diinta, Golaha Nidaaminta Maqalka ee Senegal ayaa dib u habeeyay, horaantii Agoosto, taxanaha "Infideles". Dhowr cod ayaa la kiciyey si loo cambaareeyo ficilka faafreebka. "Gaalo", xilli 1aad, ...
1 2 3 ... 5 soo socda